Yaya Toure Oo Dhalilay Ba’binta Gudi-hawleedka La-dagalaanka Cunsurunimada
HomeAfricaYaya Toure Oo Dhalilay Ba’binta Gudi-hawleedka La-dagalaanka Cunsurunimada
29/09/2016 Cabdirisaaq Maxamuud Caalin
Laacibka khadka dhexe ka ciyaara xulka Ivory Coast iyo Manchester City Yaya Toure ayaa dhalilo xogaan usoo jeediye xidhidhka FIFA ee ay ku ba’biyeen gudi-hawleedka lo xil-saraay la dagalaanka arrimaha cunsuriyadda la xidhidha, waxana laacibkan 33 jirka ah oo qayb ka mid ahaa asbaabta lo assasay gudigan sanadkii 2013 sidii talaabo kaga hor tegi lahayeen arrimaha midab takoorka.
Xoghayaha guud ee xidhidhka FIFA Fadumo Samba Diouf Samoura ayaa sheegtay in ay qoorshihi ay ka lahayeen gudigan ay dhamatay oo ay dhamaystireen hawshoodi, waxana hadalkeedu uu dhigna sidan “Waxa aanu ka lahayn qoorshe gaar ah dhinaca sharciga ah, oo lo bahna in la buuxiyo.”
Yaya Toure, oo la kulmay tacadii dhinaca midaab takoorka bishi Oktober sanadkii 2013 markii taageeryasha kooxda Man City iyago adeegsanaya erayo xanaf leh oo ku aadan laacibka Yaya Toure, waxana uu sheegay wakhtiga isago warbaahinta “Xidhidhka kubada cagta addunka miyey ku faraaxsan yihiin arrimahan cunsuriyadda ah, ka hor intan dalka Rushka lagu qaban tartanka koobka Addunka?
Waxa ay uu taala taageeryasha iyo ciyaartoyda ee la kulma dhibatoyinka cunsuriyadda ah haddanay xidhidhka FIFA waxbana ka qabaan ama sixin, markii aan farrin qoraal ah lagu wargelinayo in gudi hawleedka xidhidhka FIFA in la ba’binayo wan ka murugooday, runtii. Waraaqda farrinta ah waxa ku qorna ama ku xusna hawlaha wanagsan ay qabteen iyo natijooyinka wanagsan ka soo baxay gudigan oo talooyin badan siyeen masuuliyinta xidhidhka FIFA, lakinse aniga suasha waydina lahaa oo ay ku guuldaraysteen sidii ay ula tacaali lahayeen arrimaha cunsuriyadda oo muddo badan khaati laga tagna, wa maxay sababta loo joojiye shaqadodii oo bilow ahayd.”
Ka dib markii tacadigii cunsuriyadeed uu kala kulmay kulankii ka dhacay magalada Moskow sanadkii 2013 oo ahaa ciyaar Champions league-ga, Yaya Toure ayaa soo jeediye in ciyaartoyda madow mudaharaad ka sameyaan ka qayb galka koobka addunka lagu qaban dono Rushka sanadka 2018.